Qwilr: Idokhumenti Design Platform Transforming Sales and Marketing Collateral | Martech Zone
Qwilr: Idokhumenti Design Platform Transforming Sales and Marketing Collateral
Lwesine, Disemba 17, 2020 Lwesine, Disemba 17, 2020 UMark Tanner
Ukuxhumana kwamakhasimende kungukuphila kuwo wonke amabhizinisi. Kodwa-ke, nge-COVID-19 ephoqelela ukusikeka kwesabelomali se- 65% yabathengisi, amaqembu anikezwa umsebenzi wokwenza okuningi ngokuncane. Lokhu kusho ukukwazi ukukhiqiza konke okuthengiswayo nokuthengiswayo ngesabelomali esincishisiwe, futhi kaningi ngaphandle kokunethezeka komklami noma i-ejensi yokukhiqiza.
Ukusebenza kude nokuthengisa kusho ukuthi amaqembu okuthengisa nokuthengisa awasakwazi ukuncika kumakhono wokuxhumana nabantu ukuze anakekele futhi akhulise isisekelo samakhasimende akho. Kunesidingo esandayo sesibambiso nemibhalo yokufaka esikhundleni sobuso ukuxhumana nobuso
Ngesikhathi esinjengalesi, ikhwalithi yokuxhumana, kanye nezimpahla zokukhangisa ezihambisana nakho kungaba umehluko kumabhizinisi athola, agcina noma alahlekelwe amakhasimende. Manje kunanini ngaphambili, abathengisi kudingeka bathuthukise ikhwalithi yezimpahla zabo zedijithali ukusiza ibhizinisi ukuthi lixhumane kangcono nesiphakamiso senani labo futhi lilethe imibono yokudala iphila kude.
Ukupakisha lobu buciko kungaba yinselele. Imibono engakholeki ingabekwa ngaphansi ngenxa yokuxhumana okungalungile, ukwakheka kwamadokhumende abuthakathaka, noma ukukhetha i- Usayizi owodwa uhambisana nakho konke isifanekiso. Lokhu kwenza ukusebenzisana namakhasimende angaba khona noma akhona kungasebenzi kahle, kunganqandeki, futhi kungazenzakaleli.
Ukuqeda Ukwakhiwa Kwemibhalo Emibi
Ngaphambi kokuthi i-COVID-19 ivuselele ukushintshela ekusebenzeni okukude, amathuluzi amabhizinisi akudala abesevele evuselelwa. Kepha ukusheshisa emsebenzini okude kwakusho ukuthi okulindelwe amabhizinisi kuyashintsha, nokuthi ubuchwepheshe bebhizinisi, ikakhulukazi bezinto ezinjengokwakhiwa kwemibhalo, bekudingeka ukuba namandla amaningi ukuxhasa indlela entsha yokuthengisa buqamama.
Kodwa-ke, kusukela ekukhulumeni namaqembu, ngithola ukuthi iningi lisalungiselela izifiso ezindala ezenziwe ngengubo zesikole esidala noma ukuvuselela iziphakamiso zethempulethi ngekhophi elula nokunamathisela ukonga isikhathi. Futhi bathumela lokhu nge-PDF emile.
Ngonyaka odlule, kuvulwe ama-PDF angama-250 billion nge-Adobe software kuphela.
Uma ucabanga ngakho, kuyamangaza ukuthi amabhizinisi asathumela umsebenzi wawo omuhle kunawo wonke kumadokhumenti e-static, angavumeli ukuthi uwahlele ngemuva kokuwuthumela (uma udinga - okuvame ukwenzeka!) Noma ubone ukuthi iklayenti selivule nini idokhumenti nge-analytics yakho yedokhumenti.
Qwilr idizayini yokuqamba kanye nethuluzi lokuzenzekelayo eliguqula indlela amaqembu wokuthengisa nawokumaketha axhumana ngayo namakhasimende abo. Yakhiwa njengesixazululo ezinseleleni zamanje ezibhekene nomkhakha wokumaketha nokuthengisa, okubangelwa izindlela zokuxhumana ezingezinhle, ezindala.
Sibonile ukuthi ama-PDF amile kanye nemibhalo ye-Office Suite nje ungayinqumi kulolu suku nakulesi sikhathi, kepha ukuhamba ngamathuluzi wedizayini yedijithali kungaba yinselele kumklami wansuku zonke ongeyona imidwebo. Ngakho-ke, sizimisele ukwenza ipulatifomu elula futhi enembile ngokwanele ezovumela abathengisi ukuthi bakhe iziphakamiso, izingcaphuno, amakhasi owodwa womkhiqizo, nokuningi. Yonke imibhalo nayo iyathandeka ngobuhle futhi kulula ukuyakha, ukugcina amathemba ebandakanyekile.
Usebenzisa Idatha Ukwazisa Amaqhinga Wokungena
Njengoba imihlangano ihamba online, abathengisi nabathengisi abasakwazi ukuthembela kulimi lomzimba ukunquma ukuthi iphimbo lihambe kahle kangakanani, noma bathola ukwethula impendulo yesikhathi sangempela.
Kepha okubaluleke kakhulu, ukuqonda ukusebenza kwengqondo kwamakhasimende kwakuyinto ebaluleke kakhulu lapho kwakhiwa iQwilr. Lokhu kufanele kwazise zonke izinto ngokufinyelela komthengisi nokubika. Amathuluzi eQwilr agcwele ukusebenza kwezibalo ezithuthukile futhi angaveza imininingwane ebibanjelwe ukubhalelana ngeso lengqondo. Lokhu kufaka phakathi amandla okwazi ukuthi umamukeli wayivula nini futhi kuphi idokhumenti, yiziphi izigaba abachitha isikhathi esiningi kuzona, ukwazisa ukulandelwa kanye namasu wokuthengisa aqhubekayo.
Ukuhlala Kumkhiqizo Ngokuzibonela
Emkhakheni ofana nokumaketha, lapho ubunikazi bomkhiqizo nokubukwayo kuyikho konke, kubalulekile ukubonisa iso ngemininingwane nangobuhle kusukela ekuhambeni. Ezimweni eziningi, ikhwalithi yezokuxhumana imvamisa ibaluleke kakhulu kunombono wakho wangempela, ikakhulukazi lapho uthengisa izinsizakalo nemibono engaphatheki. Amakhasimende nawo maningi amathuba okuthi akhumbule imininingwane ethunyelwa ngezibuko ngombhalo omude.
Amandla kaQwilr akulula kwawo, kanti ipulatifomu iza igcwele izifanekiso ezisebenziseka kalula, namabhulokhi wokwakha ama-modular ukudala imibhalo epholishiwe ngokushesha. Lokhu kwenza kube lula ukulawula ukuxhumana kwenkampani yakho kuwo wonke amaqembu, uphinde ubeke iziphakamiso zakho ezinhle kakhulu nemibono ngenkathi usahlala kumkhiqizo.
Abakhangisi basebenzise iQwilr kuzona zonke izinyathelo zohambo lwamakhasimende, kusukela ekufuneni izinto kuya ekuvaleni ukuthengisa kuya kusevisi eqhubekayo. Lokhu kubonakala kusibonelo ngeplatifomu yokuphathwa kwezindleko, i-Abacus, isebenzisa i-Qwilr ukuphakamisa isu elisha lokumaketha le umthengisi we-inthanethi Kangaroo Shoes, abebezama ukukhulisa isabelo sabo semakethe.
I-Qwilr yabo Isiphakamiso kufaka phakathi izinsizakalo eziningi kulo lonke uphawu, isu lokuqukethwe, ne-prototyping, konke kuhlanganiswe kungxenyekazi eyodwa. Lokhu kwenze kwaba lula ukulawula ukuxhumana kwezinkampani kuwo wonke amaqembu, ukubuyisela umsebenzi wakho omuhle kakhulu, nokuhlala kumkhiqizo. Ngokuqeda ukuxhumana kwemanuwali okudla isikhathi kanye nesoftware engafuneki, ungabeka unyawo lwakho oluhle kakhulu phambili, ngaso sonke isikhathi.
Zama i-Qwilr Mahhala
Tags: adobeidokhumende elinophawu lokukhangisaisiphakamiso sokuthengisa esinophawuukusebenzisana kwedokhumentiizifanekiso zesiphakamisoqwilrimibhalo yokuthengisa nokumakethaukwakheka kwemibhalo yokuthengisaisiphakamiso sokuthengisaumklamo wesiphakamiso sokuthengisaisoftware yokuphakanyiswa kokuthengisaIziphakamiso Zokuthengisa
Njengomunye wabasunguli kanye ne-COO, uMark uphatha ukuthengisa nokusebenza kukaQwilr, futhi usizile ukwakha iqembu lokuthengisa elikude ngokuphelele, elisatshalaliswa emhlabeni jikelele. KwaGoogle, usize ekwakheni ubudlelwano bokushicilela obuningi obuholele ku-Google Play Amabhuku nama-ebook ku-Android. Ubuyele e-Australia ngo-2013, waqala i-Qwilr nomsunguli wasebambisene naye uDylan Baskin ukuvuselela ukuxhumana ngebhizinisi ngemibhalo.